Puerto Rico: Gresy Vaovao Ve? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2012 8:50 GMT
[Amin'ny teny Espaniôla daholo ny rohy raha tsy misy fanamarihana manokana]
Ilay manam-pahaizana mpandalina ny ara-bola, Cate Long(@cate_long), mpitondra fanadihadiana sady bilaogera vahinin'ny masoivohom-baovao Reuters, dia nitondra fanamarihana vitsivitsy mikasika ny toekarena ao Puerto Rico hoe tsy dia azo antoka loatra. Ao amin'ny bilaoginy MuniLand, izy dia namoaka lahatsoratra iray ka ao anatin'izay no anipihany ny fitoviana misy eo amin'ny toekaren'i Puerto Rico sy Gresy
i Puerto Rico dia azo tondroina ho ny firenena Andalam-pandrosoan'i Amerika. Manana fidiram-bola isam-batan'olona $15,203 — latsaka noho ny fetra ho an'ny firenena faran'izay mahantra indrindra, Mississipi, izay manana $31,046 — ary ny taha ofisialin'ny tsy fananana asa dia 15.5 isan-jato. Dimy amby efapolo isan-jato amin'ny olona ao Puerto Rico no miaina ambanin'ny tsipiky ny fahantrana, ary 20 isan-jaton'ny vola miditra amin'ny tsirairay ao amin'ny firenena no avy amin'ny fanjakana federaly na ny volam-bahoaka ao Puerto Rico. Raha fintinina, toekarena tampin-dàlan-kaleha no misy ao
Saingy ny fitambaran'ny trosa rehetra mitambesatra amin'i Puerto Rico no mahatonga azy hitovy amin'ireo firenena misedra olana izay nalaza teny anaty fampahalalam-baovao tsy ela akory izay: Gresy.
Izay nanosika azy hanoratra ity lahatsoratra ity dia ny famoahana vao haingana teo ireo taratasin-trosan'ny kaominina nataon'ny governemanta ao Puerto Rico, izay nahita fahombiazana miavaka tokoa ho an'i Long, satria, araka ny ambarany, amin'ny hoavy i Puerto Rico dia tsy ho afaka hindram-bola intsony noho ny toekareny tsy mivoatra haingana mba hiantohana ny famerenana ny trosam-panjakana mandritra ny fotoana maharitra.
Ilay mpandalina, Sergio Marxuach, avy amin'ny Center for the New Economy (Foibe ho an'ny Toekarena Vaovao) dia miaiky hoe:
Aminà sehatra faran'izay saropady kokoa, samy firenena tsy mahafehy ny politikan'ny vola, na ny fampihenàna ny sandam-bolany mba hakàn'ny toekaren-dry zareo bàhana hahafaha-mitsambikina; sady tsy manana fototra famokarana matanjaka mba hahafahany indray manainga ny fandrosoany; ary angamba ny tena zava-dehibe amin'ny rehetra, ireo toekarena roa ireo dia toekarena taratry ny fanjifàna izay tohantohanan'ny rafitra ara-bola tsy tena izy akory, izay no izy, amin'ny fidirana aminà vola matanjaka tsy mifandanja amin'ny antoka fototra ananany. Araka izany, raha ny fijeriko, ny fitoviana fototra no mibahana noho ireo sarintsarim-pahasamihafàna eo amin'ny firenena roa tonta.
Tsy zava-baovao ho an'ireo mpahay toekarena io. Na izany aza, ny lahatsoratr'i Long dia niteraka fanehoan-kevitra mahery vaika tety anaty aterineto. Ilay tranonkala Alerta Progresista [es], iray amin'ireo pejy ofisialin'ny fampielezan-kevitry ny New Progressive Party, ilay antoko tarihan'i governora ankehitriny, Luis Fortuño, dia niampanga an'i Cate Long ho isan'ny mafàna fo amin'ny Occupy Wall Street, sy tsy tena manampahaizana mpandalina ny ara-bola, ary nokaramaina hanoratra lahatsoratra ho toy ny fandaharanasa entina hamelezana ny fitantanan'ny governora Fortuño. Kanefa, betsaka ny olona tonga mba hiaro an'i Long tao amin'ny Twitter.
Ny bilaogy Latino Rebels dia namorona tantara iray ao amin'ny Storify izay mamintina tsara mihitsy ny fifanakalozan-dresaka tety anivon'ny tambajotra sosialy
Gaga i Long tamin'ny fifanoheran-kevitra rehetra nateraky ny lahatsoratra nosoratany ary ireo fanehoan-kevitra manohitra mafy voarainy avy tamin'ny fitantanan'i Fortuño. Na izany na tsy izany, tsapany fa ireo izay tena nifantoka tsara tamin'izay nosoratany dia ireo olona tsy voasaringotra amin'ilay resaka tsenan'ny trosa:
Nefa hita izao fa ny fifantohan-tsaina azo tamin'ilay lahatsoratro dia avy amin'ireo olona any ivelan'ny tsenan'ny trosa. Ireo izay namaly azy io dia ireo izay tia an'i Puerto Rico ary velom-panahiana mikasika ny hoaviny, indrindra fa ny vahoakany. Noraisin-dry zareo izay nosoratako ary naparitany tao amin'ny Facebook. Ireo gazety toy ny elnuevodia.com [es] sy bilaogy [es] dia samy nitsaingoka azy io sy niady hevitra tamin'ireo teboka saropady momba ny tahan'ny tsy fananana asa eto amin'ny nosy ary ny fitotongan'ny toekarena. Tsy mbola nahita zavatra toy izao aho tany Etazonia.
Herinandro taty aoriana i Long dia namoaka taratasy misokatra iray ho an'ilay Governora ao Puerto Rico ka ao anatin'izany no nanamafisany ny fanambarany tery aloha sy nanehoany am-panajàna ny tsy hafaliany noho ireo fanenjehana azy manokana voarainy. Na izany aza, nekeny kosa ny filazana fa nanao hadisoana izy tao anatin'ilay lahatsorany voalohany:
… Hadisoana iray no nataoko tao anatin'izy iny, izay tsy tsikaritro raha tsy efa namaky ny tatitry ny masoivohom-baovao nandahatra ireo firenena mpiara-dia aho. Takian'ny lalam-panorenanareo ny tsy maintsy andoavana aloha ny renin-trosa sy ny zanany alohan'ny hahafahan'ny governemantanareo manao fandaniam-bola mihoam-pampana hafa indray. Midika izany fa ny fanefàna ireo trosa dia laharam-pahamehana noho izay fandaniana ho an'ny fanabeazana, fiahiana ara-pahasalamana, fandoavana ny karaman'ireo mpiasa ao amin'ny governemanta sy ny fisotroan-dronono. Ny tsenan'ny trosa no faly amin'izany, mazava loatra, saingy tsy azoko antoka hoe ny vahoakanareo dia tena mahatsapa izany tokoa
*hajiantsary an'i Rickymar navoaka teo ambanin'ny CC Licence BY-2.0.